Wareejinta Faylka Bluetooth, ka faa'iidayso bluetooth-kaaga Android | Androidsis
josan 1990 | | Noticias
@ josan1990 Waxa uu noo soo diray casharkan weyn ee ku saabsan sida aad uga faa'iidaysan lahayd xidhiidhka bluetooth-ka ee Android-kayaga. Halkan waxaan kaaga mahadcelineynaa wax qabadkan quruxda badan ee dhammaan.
Hagaag, waxaan ku tusi doonaa codsi bilaash ah oo u oggolaanaya u dirida faylasha iyada oo loo marayo bluetooth on Android, sida soo dhaweynta. Codsiga su'aashu waxay tahay "Wareejinta Faylka Bluetooth«, Laga heli karo gudaha Suuqa Android.
Si aan u bilaabo waxaan leeyahay waa lagama maarmaan in la xidido si loo awoodo u dir oo ka hel faylasha ama qalab kale oo bluetooth ah.
Hagaag waxaan doonayaa inaan ku tuso hawlaha barnaamijka oo leh shaashadaha aan hoos ku dhejiyay halkaas oo aan ku sharxi doono fursadaha kala duwan.
Marka la bilaabayo arjiga iyadoo adeega Bluetooth-ka uu dansan yahay, waxay noo sheegaysaa in haddii aanu doonayno inaanu hawl galno, taas awgeed aanu riixno aqbal.
Halkan waxa ay noo sheegaysaa in dekeddu ay diyaar u tahay aaladaha kale si ay ugu xidhmaan taleefanka, kiiskan oo ah qaabka FTP. Boodhkani wuxuu soo baxayaa ka dib markii la siiyay rukhsad rukhsad ah codsiga, haddii aanan siin, mid kale ayaa soo muuqan doona isagoo leh ma jiraan wax rukhsad ah, kuwaas oo lagama maarmaan u ah in si buuxda loo isticmaalo barnaamijka.
Halkan waxa ay ina tusinaysaa faylalka aan ku hayno SD-ka, qaybtan waxa loo yaqaan "LOCAL" sida aan kor ku arki karno.
Markaad riixdo furaha Menu ee terminalkayaga, liiska codsiga waxa lagu soo bandhigayaa hawlaha soo socda:
Soo rar (X shayga): Waxa loo isticmaalaa in lagu shubo gal/faylka server-ka FTP.
edit: Waxay noo sheegaysaa haddii aan rabno in aan dhaqaaqno / koobiyo/ jarno qaybta la doortay.
Samee gal: Waxay ina tusinaysaa sanduuqa wada hadalka si aanu gal u samayno.
Tirtir (Shayga X): Waxaan tirtirnaa walxaha la doortay.
Dir (X shayga): Wuxuu u diraa walxaha la xushay Bluetooth.
Wax badan Waxay soo bandhigaysaa menu-hoosaad kale.
Cusbooneysiin: Cusbooneysii (dib u cusboonaysii) tusaha haddii wax laga beddelo.
Soo dir Xiriir: Waxaan furnaa buugga xiriirka si aan u doorano oo aan u dirno BT kuwa aan rabno.
Settings: Waxay ina tusinaysaa shaashadda Settings ee aan hoos ku arki doono.
About: "ku saabsan" codsiga.
Halkan waxaan ku haynaa shaashadda Settings app, aynu mid mid u aragno xulashooyinka:
Adeegga soo dhaweynta ee Shayga riixida (OPP):Adeegga wadaagga "Fayl wareejinta" (FTP):
Waa karti Daar ama dami soo dhawaynta faylalka
Ka bilow boot: Si toos ah u dami adeega marka aad bilaabayso terminalka.
Joogso marka aad dhow: Demi soo dhawaynta marka barnaamijku xidhmo.
Muuji ogeysiisyada: Marka la furo, ogaysiisyada waxaa lagu tusi doonaa baarka sare sida wicitaan seegay, sms, iwm.
Muuji fariimaha: Marka la furo, wuxuu soo bandhigayaa ogeysiisyada sanduuqyada qoraalka sabeynaya.
Ogeysiinta marka la helo: Waxay na soo ogeysiisaa marka fayl la helo iyadoo na tusaysa ogeysiin.
Galka goobta: Jidka kaydinta ee faylasha la helay (sida caadiga ah / sdcard kaas oo ah kaadhka xusuusta).
Isku xirka isku midka ah: Isku xirka ugu badan ee la samayn karo isku mar.
Adeegga wadaagga "Fayl wareejinta" (FTP):
Ogeysiinta dirida: Waxay na ogeysiisaa marka fayl la soo diro iyadoo na tusaysa ogeysiin.
Galka la wadaago: Jidka kaydinta ee faylasha la helay (sida caadiga ah / sdcard kaas oo ah kaadhka xusuusta).
Halkan waxaan ku haynaa sida loo sameeyo gal.
Marka aan hoos u dhigno mar la abuuray, waxay na siinaysaa fursadaha soo socda:
Soo rar: U soo rar faylka server-ka FTP
Tirtir: Tirtir galka
Ku dir Bluetooth: Ku dir Bluetooth.
Jar / dhaqaaq: Dhaqaaq galka
Nuqul: Koobi galka
Qaybta Fog-fog waxay ina tusinaysaa aaladaha Bluetooth-ka ee agagaarkeena ka shaqeeya:
Bookmarks: Qalabka loo calaamadeeyay inay yihiin kuwa ugu cadcad.
Dhawaan: Aalado aanu dhawaan ku xidhnay.
La helay: La helay inta lagu guda jiro raadinta
Si aad u raadiso aaladaha waxaan taabnaa furaha «Search» (magnifying glass) ee terminal-kayaga ama Menu-> Raadinta, raadinta ayaa bilaabanaysa.
Xulashada menu ee qaybtan waxay la mid tahay qaybtii hore:
Search: Raadi aaladaha
Soo dir Xiriirada: Waxaan furnaa buugga xiriirka si aan u doorano oo aan u dirno BT kuwa aan rabno.
Riixitaanka furaha dambe si aad uga baxdo Guriga ayaa ina tusinaysa fariintan noo sheegaysa haddii aan rabno inaan ka baxno barnaamijka.
Tani waxay ahayd dib u eegista tan quruxda badan Codsiga Android, waxaan filayaa in aad jeceshihiin iyo kuwii raadinayey wax sidan oo kale ah, aad hore u ogaateen in laga heli karo Suuqa Android Si aad ugu soo dejiso terminaalkaaga, nooca ugu dambeeya ayaa la socon kara Android 1.6 Donut.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » BULSHADA FILE BLUETOOTH, KA FAA'IIDAYSO BLUETOOTHKAADA ANDROID
Aad baad ugu mahadsantahay casharka.
Waxaan isticmaalay ka hor intaanan gelinin BgTA ROM rukhsad xidid, hadda waa inaan tijaabiyaa 100%
U jawaab WaPeR
Salaan aad iyo aad baad ugu mahadsantahay casharka,laakin ma waxaad tidhaahdaa waa ROOT? Ma garanayo inay beddeleen laakiin anigu ma ihi xidid oo si fiican ayaan u isticmaalaa bluethoot-ka, waxaan u diraa oo qaataa faylasha si qumman.
U jawaab Stbeas
kani sax uma aha HTC Hero?
CyanoGen 4.2.5 ROM-ka mar horeba barnaamijka lagu daray! Ugu dambeyntii waan baabi'in karaa Androbex iyo Bluex !! 😀
U jawaab Chocola-t
Waxaan aaminsanahay in barnaamijkani uusan u baahnayn inuu noqdo xidid si uu u shaqeeyo iyo sida ay yiraahdaan, kuwa ku salaysan Cyanogen 4.2.5 waxay horeyba ugu daraan shaqeyntaas.
Sharaxaadaadu waa kaamil, si kastaba ha ahaatee……..
Waxaan haystaa tattoo cusub oo HTC ah oo leh android 1.6 oo ay leedahay waxaanan soo dejiyey wareejinta faylka bluetooth-ka (waxa ay soo dejisanaysaa 2.30 kii ugu dambeeyay), markii aan bilaabo codsiga waxa ay mar hore i siinaysaa digniin ah in aanu si buuxda ula socon nidaamkayga. oo haa weli waxaan isku dayaa inaan isticmaalo waxay ii sheegaysaa inaysan diri karin oo soo celin karin been.
Wax fikrado ah? ama sida loo rakibo nooc hore oo ku habboon nidaamkayga, ama barnaamij kale ama balastar kale?
Runtii way ii shaqeysay, ma jirto si ay u shaqeyso, marwalba waxaan helaa qalad isku mid ah
John Benedict dijo
Olle aad baad ugu mahadsantahay taageerada
Waxaan raadiyay tan, ka dibna waan cunay dhib
Waxaan iibsaday motorola Dext aad ayaan uga helay.
Haddii aad hayso casharro kale oo loogu talagalay motorola dext
ii sheeg fadlan
soo bax mahadsanid badan
Ku jawaab Juan Benito
Ciise Rodriguez dijo
maqal su'aal, haddii ay dhacdo in bilowga aan helo in aanan haysan ogolaanshaha, sidee ku siin karaa ogolaansho aan ku xidho?
Jawaab Jesus Rodriguez
ayaa sheegay in dijo
sida loo helo ogolaanshaha bluetooh?
Jawaab ku yidhi
Waxay u shaqeysaa motorola Backflip?
Ku soo jawaab Rocio
Haa, casharkaas wanaagsan, laakiin dhibka yar ee i haysta ayaa ah in aanan haysan barnaamijkaas, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegtid halka laga soo dejiyey mar haddii aan ka heli waayay taleefanka gacanta.
Ku jawaab ben
Fadlan ama qof haddii aad ii soo gudbin karto codsiga sababtoo ah kama heli karo suuqa
Orlando Luis dijo
Sideen u soo dejisan karaa bluetooht-ka qolkayga, ma haysto mana aqaan sida loo sameeyo
U jawaab orlando luis
Hello! Waxa aan suuqa ka soo dejiyay barnaamijka waxa uu ii saamaxayaa in aan faylal ku diro moobilada kale,laakin aanan helin,waxa ay la mid tahay in aan ku xidhnayn… .
Waxaan haystaa arjiga la rakibay laakiin markaan rabo inaan ku xidho motorola kale waxay i siinaysaa bar wax badan ku qaadanaysa inay ii sheegto in kooxda kale aysan haysan ma aqaano waxa.
Iyo bluetooth-ku aniga iima shaqeeyo, kan caadiga ah, waligaa ha ii ogolaan in aan wax u diro telefoonada gacanta, ma fahmin waxa dhacaya!
Ku jawaab romina
Ka dibna haddii aan soo dejiyo barnaamij cusub oo bleutooh ah, ma wareejin karaa dhammaan noocyada faylalka oo uu ku jiro muusig? ……
Ku jawaab antonio
Yuusuf provoste dijo
Sideen ugu rakibaa codsiga x10 mini fadlan ...
U jawaab Jose provoste
Hello, dhib baa iga haysta bluetooth-ka
Oo sidee baan u siinayaa rukhsadaha xididka sababtoo ah aniga ayaa sheegaya in aanan haysan rukhsad xidid, ka caawi taas
Ku jawaab Marcelo
WAXAAN LEEYAHAY SAAXIIB IIBsaday MB300, UU WAX KA FAHMAAN KARO SOFTWARE AMA COMPUTERKA.
Waxay leedahay BLUUETOOTH laakiin ma shaqaynayso WAAN HORTA UGU RABAY BFT waxna ma dhacaan.
Ma fahmin sababta ay motorola u iibiso alaabaha aan hadhow shaqaynayn ama leh hawlo laakiin si ay u shaqeeyaan waa inaad ku rakibtaa software-ka aan sidoo kale 100% socon karin.
Waxaad mooddaa in aan iibiyay 0 KM oo ay ku rakiban yihiin masaxadaha muraayadaha balse aan lahayn mishiinka yar ama furaha lagu shido. 🙁
U jawaab GAUCHO
Waan ka xumahay, waan baxay, furaha ma heli karo. iga raali noqo.
Sideen ugu tagi karaa ROOT MB300?
Haye asxaabta!! Waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii qof uu gacan i siin karo. Ma heli karo in talefanku uu dhawaaqo mar kasta oo la iga baaqdo, ama farriin aan la akhriyin. Taleefannadii hore ee Motorola waxaan haystay ikhtiyaarkaas oo wax badan ayay ii adeegtay. Mid kale, saacada alaarmiga ma dhawaaqdo haddii unugga la damiyo ... iyo fariimaha ma haysto ikhtiyaar aan ku soo dejiyo hees ka mid ah maktabadda muusikada, kaliya dhawaaqyada "farts" ee la socda telefoonka hahaha Waad ku mahadsan tahay gacanta aad i siin karto !
hello waxaan haystaa xperia mini pro waxaanan ka soo dejiyay wareejinta feylka Bluetooth suuqa kamana shaqaynayso aniga hao ???
Ku jawaab liliana
Aad u fiican codsigan waxaa lagu soo dejiyey suuqa aniga huawei um840 oo si weyn ayuu ii shaqeeyaa. Waxaan soo diri karaa oo heli karaa muuqaalo, sawirro, maqal iyo dukumeenti, waqti gaaban gudaheed. Waxa aan hadda u soo iibiyay pc-ga adabtarada bluetoothka oo aan ku xidhay waana taas.
U jawaab remax
Bulsho leh waxaan u baahanahay hanuunin, waxaan iibsaday xariijinta 5 wax walbana si fiican ayay u socdaan soo dir sawirada fiidiyowyada qoraallada ilaa aan la kulmo saaxiib doonayay hees aan ku lahaa qolkayga iyo markii aan rabo inaan ka gudbo bluetooth waxaan gartay inaan ma haysto ikhtiyaarkaas, mm ma waxaan u baahanahay barnaamij yar si aan u soo diro maqal ?? i caawi fadlan!
U jawaab jdvg
Waxa aan ku shubay xawilaadda bluetooth-ka hadana waxa ay noqotay in aan uninstall-ka saaro waayo bluetooth-ku waa uu shaqayn waayay hadana waxa aan rabaa in aan shido waxa ay ii sheegaysa in bluetooth-ka dami ama aan la bilaabin kamana shaqayn karo wareejinta faylka ama la menu shabakadaha wireless , ayaa xal waa xawaash xt 300 android
U jawaab Babygon2000
Taas oo kale ayaa igu dhacda...haddii aad xal u hesho fadlan iigu soo dir at cecilia_julu@hotmail.com mahadssssssss
U jawaab Cecilia_julu
Sideen ugu xidhaa bluetooth-ka unuggayga MB300, qof baa og, ma helo ama ma helo qalab
Jabtada teleefankan waxay igu garaaceen wax kasta oo aad ku bixin lahayd, iibso weydiiso ogolaansho inay noqoto mid la taaban karo sida gringos
Ku jawaab Henry
SUPR GOOD CODSIGA LAAKIIN HADDII AAD OGTAHAY SIDA LOO ISTICMAALO WAX KASTA OO AAD KULA XISAABTID IN XOGTA WAREEJINTA AY UGU FIICANTAHAY IN AAD HAYSO BULSHOOT DHEER AH INTAAS WAXAAN IDIIN SOO BANDHIGAYAA SAMSUNG GALAXY AY II YIHIIN.
Ku jawaab Alexanderfavi
Hello!! su'aal: waxaan ku xidhaa basbaaska bluetooth-ka iyo qalabka muusiga ee VW FOX wuuna isku xidhaa balse sidaa uma shaqeeyo waxaana ka soo dhex muuqday qalabka gaadhiga halyeyga ah ee ay ku qoran tahay "AUDIO" codka qalabkana waa la jaray dhowr ilbiriqsi. Sida muuqata waxa uu u qaataa sidii qalab maqal ah oo aanu u qaadan sidii telefoon ahaan. Maxaad ku talinaysaa inaan sameeyo si aan u xalliyo oo ay si fiican isugu xirto? su'aal: waxaan ku xidhaa basbaaska bluetooth-ka iyo qalabka muusiga ee VW FOX wuuna isku xidhaa balse sidaa uma shaqeeyo waxaana ka soo dhex muuqday qalabka gaadhiga halyeyga ah ee ay ku qoran tahay "AUDIO" codka qalabkana waa la jaray dhowr ilbiriqsi. Sida muuqata waxa uu u qaataa sidii qalab maqal ah oo aanu u qaadan sidii telefoon ahaan. Maxaad ku talinaysaa inaan sameeyo si aan u xalliyo oo ay si fiican isugu xirto?
mahadsanid iyo salaan!!!!!!
karla wax dijo
Ka jawaab karla waxy
Finismoo!! Mahadsanidiin cid kasta oo na caawisa!! Salaan 🙂
U jawaab Drax
Ma garanayo inay u shaqeyso xperia x.8
U jawaab Depredadorknd
Waxaa loogu talagalay Android oo dhan
U jawaab Lalin_autentico_ska
Sideen u gudbiyaa muusiga ??? Waxaan haystaa basbaaska motorola waxayna ii sheegaan in aan soo dejiyo BFT-da hore ayaan u haystay laakiin sidee loo isticmaalaa?
U jawaab Rociojoseaguero
Sideen u dhejiyaa mawduuc ku yaal kaadhkayga SD sida ringtone SMS ??? ama xiriir gaar ah?
WAXAAN HAYSATAA XPERIA ARC LAAKIIN MA AQAAN SIDA AAN UGU XIDHNAYO BLUETOOHT-KA MA I SHEEGTAY SIDA AAN SAMEEYO AMA CODSIGA AAN SAMEEYO.
U jawaab JENNYFF_12
waan jeclahay_18 dijo
hello…? Waad ogtahay, bluetooth-kayga, ma garanayo waxa dhaca, waxaan rabaa in aan fayl u diro telefoon kale mana garanayo, waa horumarkii UM840
U jawaab Me_amo_18
JAH WALDEMAR ALVI dijo
Sideen uga dhigi karaa inay si toos ah ugu xidhmaan talefannada gacanta oo ay isla markiiba ku ogaadeen bluetooth...tusaale ahaan, waxaan galaa meherad Pizzerias, Donuts, Coffee, waan ogahay, iyo in talefanka gacanta aan fariin ama xidhiidh u diro goobta ganacsiga….
U jawaab JAH WALDEMAR ALVI
hello mellamo josedetn
U jawaab josedethmolina
gub erayada ku dheh boggan ha ku samayn bulgarsito dadweynaha
Florentino Matumay Reyna dijo
Waxaan soo iibsaday laptop Lenovo ah oo leh bluetooth waxaanan isku dayay inaan ku xidho taleefanka gacanta ee LG 32 ee leh bluetooth; Waxa aan u adeegsaday in aan u diro faylal ay ka mid yihiin muusiga, sawirada talefanka gacanta ee saaxiibaday aniga oo ku xidhaya qalabkooda wax walbana si fiican ayay u shaqeeyaan.
Dhanka kale, bluetooth-ka Laptop-ka kuma shaqeeyo talefanka gacanta ee LG 32. Haddii soo-saaraha Laptop-ka uu ku rakibo bluetooth-ka kaliya ee androd ka dibna qalaji sababtoo ah bluetoothka waa inuu noqdaa dhammaan telefoonada gacanta ama laptop-ka noocyada kala duwan.
U jawaab Florentino Matumay Reyna
Jorge Ramos dijo
Hadda waxaan rakibay wareejinta faylka bluetooth iyo casharrada aan hadda arkay waxaan heli doonaa fikrad ah sida loo isticmaalo iyo 100% xD
U jawaab jorge ramos
QALBIGA QURUXDA BADAN, QARAXO CUSUB OO CAAN AH